Kuqothwe ngenhlamvu obesezoshada | News24
Kuqothwe ngenhlamvu obesezoshada
UMnu Nathi Zuma nengoduso yakhe uNks Zandile Zondi.ISITHOMBE: sithunyelwe
USASHAQEKILE umndeni wakaZuma endaweni yaseSweetwaters ngemuva kokudutshulwa kubulawe ilunga lawo lomndeni ebesekusele inyanga eyodwa nje kuphela ukuba libophe ifindo likasofasilahlane.
UMnu Nathi Zuma (44) udutshulwe ngoMgqibelo ebusuku mhla zingama-29 kuNhlangulana (June) khona eSweetwaters.
UMnu Zuma ubulawa nje ubezobopha ifindo likasofasilahlane nengoduso yakhe uNks Zandile Zondi ngasekuqaleni kwenyanga kaNcwaba (August).
Ngokuthola kwe-Echo ngengoduso kaMnu Zuma, usuke edolobheni lapho kade esehlala khona nengoduso yakhe isikhathi esiningi wathi uya emngcwabeni eSweetwaters.
Elandisa i-Echo uNks Zondi uthe uhambise uMnu Zuma eSweetwaters njengomuntu obezoya emngcwabeni wase yena esebuyela emuva edolobheni lapho ehlala khona.
“Ngithole ngoba naku eseshonile ukuthi wagcina engayanga emngcwabeni ngoba izimpahla lezi abesezigqokile akuzona lezo ahamba ezigqokile ngesikhathi ethi uya emngcwabeni.
Kukhombisa ukuthi wadlula ekhaya lakhe washintsha izimpahla wabe esehamba eyozijabulisa endaweni yaseMabane ngoba ubengumuntu ofikayo vele ezinkambini zikaFaro,” kubeka yena.
Uthe bebejwayele ukuhamba imingcwabo kanye nemicimbi ndawonye noMnu Zuma kodwa ngaleli langa wathi uzohamba nomngane wakhe njengoba agcina engafikanga nasemngcwabeni.
“Ngalo usuku lwesigameko ngesikhathi zehora lesikhombisa ntambama ngamuthumelela umyalezo ngimubuza ukuthi ulaphi ngoba kuhlwile kanti nangaphandle akuphephile kodwa akazange aphendule.
“Ngaqhubeka ngamuthulela imiyalezo ngimubuza kungani angasho ukuthi akalandwe okanye asale eselala ekhaya lakhe eSweetwaters ngoba sekuvele sekuhlwile kodwa akazange aphendule kwaze kwaba izikhathi zehora lesisishiyagalolunye ebusuku lapho ashaya khona ucingo.
“Ngesikhathi eshaya ucingo washayela umakhalekhukhwini wengane yami ngoba iyona eyayizomlanda vele. Wakhuluma nayo ngayizwa ithi ayisamuzwa kahle uyanqamuka nami ngokunganaki ngathi ayi muyeke uzophinde akushayele nangempela waphinda kodwa esefonela kumakhalekhukhwini wami,” kubeka yena.
Uthe into amutshela yona ukuthi ucela ukuba azomulanda wabe esemutshela nendawo lapho bezomuthola khona.
Uthe akazange ahambe yena wathumela indodana yakhe neyathi mayifika lapho kwakumele ihlangane khona noMnu Zuma yangamufika yabe isibikela uNks Zondi.
“Ngazama ukumushayela ucingo uNathi kodwa umakhalekhukhwini wakhe wase ukhala ungasabanjwa. Ngatshela indodana yami ukuthi ayibuye uma engekho ngoba ngisabela impilo yayo. Ngalesi sikhathi mina ngimufonela uNathi ngimbuza ukuthi ulaphi ingane imulindile kushukuthi ingalesikhathi sebemudubulele vele eselele phansi,” kuqhuba yena.
UNks Zondi uthe ngaphambi kwalesi sigameko bebenako ukusola vele ukuthi kukhona abantu ababalandelayo inkinga ukuthi bebengazi ukuthi bafuna yena yini okanye bafuna uMnu Zuma.
Uthe kusukela ngenyanga eyedlule besekukhona izimoto ezahlukene ebesezifika ekhaya likaMnu Zuma zime esangweni zizungeze zijike izikhathi zaze zabe zintathu.
Uthe besekukhona ngisho izingcingo ebesezingena kuMnu Zuma zithi akaphume ebusuku kodwa ziqhamuka kubantu angabazi. Uthe besekunabantu abebefona ngezinombolo ezingaziwa. “UNathi ubulawele ukuthi ubezoshada nje kuphela akukho okunye. Ngidiniwe nje kakhulu ngoba angazi ukuthi ubani obengabulala uNathi umuntu okade ezilungele kanye obengaqali muntu ngisho kuthiwa usethintile. Izinhlamvu abamudubule ngazo zonke zingene ekhanda nokukhombisa ukuthi lo muntu obemudubula ubefuna ukuqeda vele ngaye.” UNks Zondi uthe uyathemba ukuti umthetho uzoyidlala indima yawo kodwa wathi yena bonke abenzi bobubi ubanikelela kuNkulunkulu.